Fanatanjahantena solosaina - inona izany? Ny fomba hanaovana? Ohatrinona ny vidin'ity? Ahoana no hanombatombanana?
Fanatanjahantena solosaina - inona izany?
Fanatanana ny solosaina no fomba mahazatra sy mendri-kaja indrindra amin'ny haingo akanjo. Izy io dia mirakitra soratra amin'ny soratra, marika na lootype miaraka amin'ny fampiasana kofehy sy milina fitantanana solosaina izay nanolo ny asa tanana ankehitriny.
Azontsika atao ny mandray embroider ara-bakiteny na inona na inona ary saika inona. Ny sulam-bolan'ny solosaina dia am-pahombiazana amin'ny karazana lamba rehetra, mamorona akanjo tokana. Ity akanjo nataon'ny mpiasan'ny orinasa ity dia manorina ny maha izy azy, marika ary fahatsapan'ny mpiara-monina. Ny mpiasa rehetra, toy ny mpilalao baolina manao fanamiana mitovy, milalao amin'ny ekipa iray.
Tsidiho ny magazay an-tserasera >>
Ny sulam-bolan'ny solosaina dia afaka ihany koa ampiasaina tsara hamoronana fitaovana sy akanjo fanaovana dokambarotra. Logam-baravarana sy anaran'ny orinasa amin'ny T-shirt sy sweatshirts dia mety ho fanomezana tsara ho an'ny mpanjifa. Amin'ny fitafiantsika ny fampiroboroboana dia hampiroborobo ny marika atolotray izahay.
Na izany aza, ny ambina eo amin'ny solosaina dia tsy ampiasaina amin'ny akanjo fotsiny. Azonao atao koa ny mampiasa embroider amin'ny alàlan'ny solosaina satroka, kitapo, towels, fandroana ary workwear.
Logos sy soratra miendrika beidra dia mateza kokoa noho ny mora esorina sy vita amin'ny peelable miforitra, mipetaka amin'ny akanjo toy ny decal mahazatra.
Fanamboarana solosaina - ny tantaran'ny fanontana momba ny akanjo fanaovana dokambarotra
Efa tamin'ny fahagola, ny vehivavy modely vita amin'ny akanjo sy lambam-paty amin'ny tanana.
amboradara matetika singa iray amin'ny kolotsaina sy tandindon'ny faritra iray sy firenena iray. Ampy ny mampatsiahy ny Kashubian malaza na ny highlander embroidery, izay singa tsy azo ovaina amin'ny fitafiana entin'olona.
Ny mijoro amin'ny vahoaka amin'ity fomba ity, ary koa ny hamantarana ireo ekipa olona, ​​dia nampiasaina haingana ny manam-pahaizana momba ny varotra sy ny PR. Ny mpiasa iray mitafy akanjo voafantina dia mitovy amin'ny mpanjifa. Ohatra, tahaka ny mpanamory fiaramanidina, polisy sy miaramila ny hajaina amin'ny fanamiana kanto azy ireo, ireo mpiasa amin'ny indostria hafa dia hita fa hafa tanteraka amin'ny akanjo fanamiana sy miavaka. Tsy mahagaga raha orinasa maro no nanapa-kevitra ny hampiasa vola amin'ny fanamiana tsy manam-paharoa. Misaotra an'io, ny mpiasa dia afaka mahatsapa toy ny ekipa iray, milalao miaraka amin'ny tanjona iray ihany.
Ny fampiharana koa dia midika hoe fitaovana sy akanjo fanaovana dokambarotra. Tian'ny olona ny fanomezana, freebies na loka. Raha mahazo kitapo, cap, na T-shirt miaraka amin'ny marika amina orinasa iray izy dia azo antoka fa hitafy azy io, toy izany ny dokambarotra ny marika.
Fampivoarana ara-toekarena sy fanatontoloana dia nitombo ny fangatahana ny amboradara isan-taona. Soa ihany, ny fivoaran'ny teknikan'ny solosaina dia nahatonga ny fitomboan'ny fotoana. Amin'izao fotoana izao, ny soratra vita amin'ny soratra sy ny modely amin'ny karazan-damba sy kojakoja isan-karazany dia haingana, marina, marina, azo averina ary mora vidy. Androany, embroideries an'arivony dia azo tanterahana nefa tsy misy olana, ao anatin'ny fotoana fohy, dia ho tafataona na dia ireo fanantenana lehibe indrindra aza izy ireo.
Ahoana ny fanamboarana amboradara amin'ny solosaina?
Fanatanisan-tena amin'ny solosaina - teknolojia inscrit ny soratra amin'ny akanjo
Ny milina maoderina dia nasiana fanjaitra am-polony sy kofehy amin'ny loko isan-karazany. Ny dingan'ny informatika no tantanan'ny solosaina. Miorina amin'ny famolavolana nampidirina, manjaitra ny taratasy sy endrika ny milina.
Ahoana ny fomba famolavolana amboradara, patch
Ampy anao ny manapa-kevitra hoe aiza no toerana na toerana misy ilay zavatra tadiavinao ny amboradara. Ankoatr'izay, mila misafidy ny famolavolana sy ny habeny ianao. Matetika, ny soratra voasoratra amin'ny milina sy logos an'ny orinasa sy ny andrim-panjakana dia natao pirinty. Ny modely tokony halefa miaraka amin'ny baiko, ary hanampy anay ny mampifanaraka azy ireo amin'ny filàn'ny milina fanjairana solosaina ny manampahaizana manokana.
Ny tombotsoan'ny amboradara amin'ny solosaina
Ny fisehoana dia zavatra mahatonga akanjo izay misy marika embryt. Manisy kalitao vaovao ny amboradara vita an-tsitrapo. Mahatsapa amin'ny fikasihana, manaingo fotsiny. Ny amboradain'ny solosaina dia manome ny fitafiana sy ny akanjom-bolo akanjo sy ny hatsaran-tarehy, ary ny marika izay ampahafantarina azy dia nahazo voninahitra. Alao sary an-tsaina ny akanjo T-shirt roa, ny iray misy marika orinasa miloko marika ary ny iray manana foil dokam-barotra mifikitra aminy. Ny sary toy izany dia mampahatsiahy ny juxtaposition kanto kanto sy kanto manaraka ny plastika sy mora vidy.
Vokatr'izany, ny faharetan'ny écranestan'ny solosaina dia tsy manan-tsahala kokoa noho ny mpifaninana aminy. Ny embroidery dia saika mitovy habe aminy ihany koa raha ny fitafiana voaravaka azy. Tsy mila manahy fa hihena ny marika na soratra. Ny amboradain'ny solosaina dia ampahany amin'ny fitafiana, ary tsy vitan'ny fantsom-pifandraisana mora raisina sy tsy maharitra intsony ary miharatsy haingana ny endriny.
Ny ambaratonga solosaina dia mety ho saika loko. Ny fetra tokana dia ny lokon'ny kofehy izay ampiasaina. Ny fanodinana dia tanterahana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso noho ny fanaraha-maso ny solosaina.
Ny embroidery dia mety ho tena ilaina manokana. Ny teknolojia solosaina dia mamela ny fanoratana ny marika mazava, marika ary soratra.
Miaraka amin'ny haavon-tsavony avo kokoa, ny fandevon-kofehy dia mijanona eo amin'ny lafiny ara-toekarena fotsiny. Somary ambany ny vidiny, ka mety tsara amin'ny haingoana ny karazan-damba isan-karazany - lobaka, t-shirt, polos, pataloha, kapa, ary koa lamba famaohana, satroka sy kitapo.
Fahadisoana ny amboradara eo amin'ny solosaina
Mifanohitra amin'ny fanontana pirinty amin'ny solosaina mahazatra, tsy azo atao ny mametaka sary feno miaraka amin'ny palette miloko tsy manam-petra. Tsy izay anefa no resahina. Ny amboletra dia fanamarihana ny fomba nentim-paharazana, ny fikaingoana ny fahalehibiazana, satria mifamatotra amin'ny palitao fitaovam-piadiana mamelana ny akanjo amin'ny fiaraha-monina avo. Tsy misy ifandraisany amin'ny sary kitschy, maro loko ary cheesy.
Ny amboradain'ny solosaina amin'ny lamba ambany ambany misy lanjany ambany dia tsy azo asorony. Azo heverina fa tokony hahalavitra ny 190 g / m ny fitsangan-tarehy amin'ny tekstil2. Na izany aza, sarotra ny an-tsaina ny fangaron-tsary misy marika vita amin'ny T-shirt mora vidy be loatra izay asehon'ny zava-drehetra izany.
Fanamboarana solosaina - vokatra malaza sy akanjo amin'ny dokambarotra
Polo-lobaka akanjo misy amboara
Ny fiaraha-miasa voalohany amin'ny embroidery? T-shirt misy kofehy sy marika voaravaka tsara eo amin'ny tratra. Ny fitambaran ny hatsaran-tarehy sy ny fampiononana. Ataovy faly ny olona hitafy t-shirt toy izany amin'ny fangon'ny orinasa na andrim-panjakana.
T-shirt misy takelaka misy soratra sy soratra
Vonona ny hitafy isan'andro. Avelao ny mpiasanao na ny mpanjifanao hampahafantatra ny marinao manao akanjo fohy vita amin'ny marika na soratra manentana azy ireo hampiasa ny serivisinao.
T-shirt misy pirinty
T-shirt manara-penitra sy soratra vita amin'ny solosaina misy soratra na soratra vita amin'ny solosaina dia fifangaroana tonga lafatra izay ahafahanao mijoro amin'ny marobe an'ny t-shirt shinoa fanaovana doka avo lenta ary matevina.
Sweatshirts miaraka amina modely nasiana amboradara
Ny hoodie mahazatra dia afaka mamoaka ny vokatrao na ny marikao ihany koa. Amboary ny tenimiafinao, anarana sy / na logo ao amin'ny sweatshirt.
Fanamboarana solosaina amin'ny volon'ondry
Tianao ve ny mpiasao mba ho mafana sy miaraka amin'ny fahitana amin'ny orinasa miaraka amin'ny akanjony? Na mety te hamorona fitafiana fampiroboroboana tena tsara ho an'ny orinasanao? Solon-tsolika vita amin'ny informatika dia safidy lehibe.
Akanjo misy amboradara amin'ny solosaina
Momba ny ara-dalàna sy kanto kokoa? Asaivo manompo ny mpanjifanao amin'ny akanjo kanto misy takelaka misy marika. Misafidiana ny amboradara solosaina amin'ny lobaka.
Nisy pataloha sy kapa
Tsy ny akanjo ambony ihany no tonga lafatra amin'ny fanoratana soratra na modely. Embroider amin'ny pataloha na shorts mba hamorona akanjo fampiroboroboana tsy manam-paharoa.
Fanamboarana solosaina amin'ny kapila
Sarotra ny sary an-tsaina ny takelaka baseball tsy misy marika voatosika ao amin'ny ekipa ankafizinao, oniversite na diplaoma anarana. Ataovy mahakivy ny sain'ny andrim-panjakana na orinasa misy anao. Aforeto amin'ny satroka izy ireo.
Tavila sy bathrobes misy sary amboradara sy soratra
Tsy misy manavaka ny hotely sy ny SPA toa ny lamba famaohana sy lamba fandroana misy marika. Ampodio ho lasa zavatra tsy manam-paharoa ny lamba famaohana matevina manamafy izay maha-sarobidy ny marika. Voninahitra ho anao io, fa fahatsiarovan-tena ihany koa ho an'ny vahiny vahininao.
Kitapo misy amboradara amin'ny solosaina
Ahoana no hanamarihana mora kitapo misy ny anarana sy ny logo an'ny orinasa? Miasa tsara ny amboradara amin'ny solosaina. Ny vola mora sy haingana, ny kitapo mahazatra afaka manova ny mampiavaka ny orinasa.
Fampitandremana akanjo sy amboradara amin'ny solosaina
Ny akanjo ihany koa dia miasa tsara ho toy ny mpitatitra fanakalo-bato amin'ny solosaina. Anarana, fiasa, anaran'ny orinasa sy logo - embroider amin'ny akanjo na singa manokana amin'ny asa sy ny fahitana avo lenta.
Fanatanjahantena solosaina - ohatrinona no vidiny?
Ny amboradain'ny solosaina dia mora vidy. Na izany aza, sarotra ny mamaritra ny tena vidin'ny stitching tokana, satria ny herinaratra dia voataona ny maro.
Ny amboradain'ny solosaina dia ho mora kokoa noho ny baiko lehibe kokoa. Ny vidiny dia misy fiantraikany ihany koa ny haben'ny faritra natao peta-kofehy, ny karazana embroidery ny tenany, ny haben'ny modely eo amin'ny tany, ny habetsaky ny fanjaitra isaky ny cm.2 materialy, ary koa ny isan'ny toerana tokony hametrahana ny amboradara amin'ilay entana.
Ny vidiny dia tsy voataonan'ny isan'ny loko ampiasaina, satria ny milina fanjairana dia manana kofehy maro.
Manasa anao izahay amin'ny fanombanana manokana tetikasa. Azafady mba alefaso aminay ny sary tianao tianao hamboarina sy fampahalalana momba ny habetsaky ny baoritra.
5 / 5 ( 53 vato )
inona no amboradara amin'ny solosainainona no amboradara amin'ny solosainaaiza no anaovana ny amboradara solosainaamboradain'ny solosainasolosaina informatika Białystoksolosaina informatika Bielskosolosaina informatika bydgoszczvidin'ny vita amin'ny solosainalisitry ny vidin'ny embroerysolosaina informatika inona izanysolosaina informatika inona izanyécritement vita amin'ny solosaina ao Częstochowasolosaina vita amin'ny informatika gdańsksolosaina informatika Gdyniasolosaina vita amin'ny informatikaécrités vita amin'ny solosaina Gnieznosolosaina misy solosaina ohatrinona ny vidinytoy ny amboradara misy solosainasolosaina informatika ny fomba hanombohanasolosaina vita amin'ny informatika ny fomba hataosolosaina amboradara inona milinasolosaina informatika inona pkdKalisz vita amin'ny solosainasolosaina vita soratra informatikaécrités vita amin'ny solosaina ao amin'ny kielceordinatera Koninamboradain'ny solosaina ao Koszalinécrités vita amin'ny solosaina Krakowsolosaina sambo solosainalisitry ny boaty lisitra bordiralysolosaina informatika Lublinamboradain'ny solosaina amin'ny T-shirtsolosaina amboradarafanoratana solosaina Nowy Sączsolosaina informatika olsztynamboradain'ny solosaina ao Opolesolosaina vita amin'ny solosainasolosaina poznańsolosaina robinasolosaina informatika an'i Rybnikécran ny solosaina reichsolosaina informatika Silesiasolosaina informatika Słupskamboradara misy solosaina ao Sosnowiecsolosaina informatika swarzędzécrités vita amin'ny solosaina bristlesfanjairana eo amin'ny solosainaamboradain'ny solosaina ao Tarnówamboradara misy solosaina ao amin'ny Toruńady vita amin'ny solosainalisitry ny lisitra vita amin'ny solosainasolosaina amboradaramodely amboradara amin'ny solosainasolosaina ravina maintsoohatrinona ny vidin'ny embroery amin'ny solosainany fomba fanaovana ambara informatikany fomba vidiny ny ambaratonga solosainamanao toy ny amboradara solosainany fomba fanaovana amboradara amin'ny solosainany fomba handratra ny amboradara amin'ny solosainany fomba famolavolana ny ambulad amin'ny solosainany fomba fanaovana amboradara amin'ny solosainaT-shirtsdianakanjo fanaovana dokambarotramanjaitra
Jereo lahatsoratra hafa:
31 Aogositra 2020
1 Jolay 2020
famolavolana sy famonoana: Pikaraka tonga lafatra